Golaha Wasiirrada oo ka shiray arrimaha qaxootiga ka imaanaya Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shir ay golaha wasiirrada dowladda Federaalka Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha Qaxootiga iyadoo laga dooday sharci siyaasadeed loo dejinayo Qaxootiga iyo xaquuqdooda.
Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Sahro Cali Samatar, ayaa Warbaahinta u sheegtay in ay Xukuumadda ku howlan tahay sharci u gaar ah qaxootiga dalka u dhashay iyo kuwa wadamada kale u dhashay ee Soomaaliya ku sugan, waxa ay intaa ku dartay in ganacsate Soomaaliyeed uu ku Yaboobay Markab soo daabiula dadka Soomaaliyeed ee weli ku xaniban dalka Yemen, waxa ay ku baaqdey wasiirka Haweenka in laga wada shaqeyb-galo gurmadka dadkeenna.
“Dowladda Soomaaliyeed waxey go’an ku gaartay in aan soo saarno sharciga qaxootiga ah si xaquuqdooda loo ilaaliyo, marka qaxootiga mid waa dadka Yemen ah oo waxa ay hoos imaanayaan sharciga caalamiga ah International Conflation Refugee, dadka kale waa dad Soomaaliyeed oo ku soo laabanaya dalkooda, Insha Allah waxaan rabaa inaan dadka Somaaliyeed la wadaaggo in dowladda kaliyah aan lagu eegin ee laga wada qeyb-qaato ,waxaan u mahadcelinayaa shaqsi Soomaaliyeed oo ku deeqay Markab dadka qaxootiga soo daad gureen doona” ayeey tiri wasiirka Haweenka.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa abaalmarineysa Ganacsade Cabdi Cali Faarax oo ku yaboobay hal Markab oo dalka Yemen ka keenna dadka gurmadka u baahan, sida ay ku dhawaaqeen golaha wasiirrada Soomaaliya, Ridwaan Xaaji Cabdiweli Afhayeenka Xukuumadda ayaa yiri.
Dhinaca kale Golaha wasiirrada Soomaaliya, ayaa ka hadlay sharciga ka hortagga lacagaha been abuurka ah ee ka yimaada dibedaha, kuwaas oo caalamka ka ah dambiyo waa weyn, kaas oo ay soo gudbisay wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, sida uu sharraxayo Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya.
“Sharcigan weli dooddiisa ayaa socoto waxa uu soo gabagaboobi doonaa todobaadyada soo socda, sharciga waa mid looga hortagayo lacagaha sida qaldan ama been abuurka ah ku soo gala dalka, Soomaaliya waxa ay qaadaneysaa go’aanka uu caalamka ka istaagay arrintaan, waxaana ka qeyb-geli doona Garyaqaanka guud ee dowladda iyo hey’adaha kale ee dowladda, waxaana loo gudbin doonaa marka uu golaha wasiirrada marayo golaha Barlamaanka” ayuu yiri afhayeenka xukuumadda.
Wasiirka Gaashaandhiga, Cabdulqaadir Sheikh Cali Diini ayaa ka warbixiyey arrimaha amniga isagoona tilmaamay in dowladu ay xoojinayso howlgalka ka dhan ka ah Al-shabaab, ciidamada ku jira aagaga horana ay habeen iyo maalin u taagan yihiin difaaca dalka, iyagoona jab xun gaarsiiyey kooxaha nabad diidka oo weeraro ku soo qaaday meelo kala duwan.
Wasiirka ayaa ka hadlay safar gaabaan oo ku wehliyey Madaxweyne JFS Xasan Sheikh Maxamuud oo ay shalay ku tageen qaar ka mid ah furumaha ciidanka ee gobolka Shabeelada Hoose.
“Madaxweynuhu wuxuu kulamo la qaatay ciidanka iyo saraakiisha hogaamisa ciidamadaas, wuxuuna balan qaaday in ciidankii ka dagaalamay Awdheegle la siinayo abaal marin, ciidamada kale ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalkana dowladu markasta ayey u taagan tahay iney daboosho baahiyahooda qalab iyo nololeed.” ayuu yiri Wasiir Diini. Isagoo dhanka kale xusay in kooxaha nabad diidku ay weerar ku soo qaadeen Ceel Cade oo ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaasna looga laayey rag faro badan, waxaana dagaalkaas horumuud ka ahaa dadka deegaanka oo kaashanaya ciidanka milateriga.
Madaxweynaha Puntland oo kala diray madaxdii gobolka Bari & golihii deegaanka Boosaaso